အိမ်ထောင်ပြုမယ် စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် မလွဲမသွေ ရှောင်ရမယ့်အချက်က ကွာသုံးကွာ၊ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » အိမ်ထောင်ပြုမယ် စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် မလွဲမသွေ ရှောင်ရမယ့်အချက်က ကွာသုံးကွာ၊
အိမ်ထောင်ပြုမယ် စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် မလွဲမသွေ ရှောင်ရမယ့်အချက်က ကွာသုံးကွာ၊
Posted by nyimalay on Jan 26, 2011 in Know-How, DIY | 29 comments
> ပါသုံးပါ နှင့် ချာသုံးချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသုံးပါးကို မိန်းကလေးက ပဲဖြစ်ဖြစ်
> ယောက်ျားလေးကပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိနှင့်လက်တွဲမယ့်သူမှာ ပါလာရင်တော့
> ဝေးဝေးမှရှောင်ကြဉ်ရန် ပြဆိုထားပါတယ်။
> (၁) တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကွာလျှင် (၂) အယူဘာသာကွာလျှင် (၃) စိတ်ဓာတ်ချင်း
> ကွာလျှင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
> တိုင်းခြားပြည်ခြား လူမျိုးခြားနှင့် ဘာသာမတူသူ ဘာသာခြားကိုယူမိရင်တော့
> ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုကို စွန့်ရပါလိမ့်မယ်။ ထို့အတူ ဘာသာတူ
> လူမျိုးတူ ဖြစ်လင့်ကစား စိတ်ဓာတ်မတူ ကွာခြားလျှင်လည်း တစ်မိုးအောက်မှာ
> ၂ယောက်အတူနေဖို့ မစဉ်းစားသင့်ပါ။
> အနာရောဂါဆိုသည်မှာ ခေတ္တနာဖျားတာမျိုး မဟုတ်ပဲနာတာရှည်မျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။
> အကြွေးပါလာလျှင် ဆိုတာကတော့ လက်မထပ်ခင်ကတည်းက အကြွေးတင်နေရင်ဖြင့်
> အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ အညွှန့်လူဖို့ အတော်ခဲယဉ်းသွားပါပြီ။အပိုစားမည့်သူပါလာလျှင်
> ကျွေးနိုင်သည်ပဲထားဦး စကားပိုလာသည့်အတွက် ရှင်းရတဲ့ပြဿနာနဲ့ ကြုံတွေ့ နိုင်
> (၁)ပညာရေးချာလျှင် (၂)စီးပွားရေးချာလျှင် (၃)လူမှုရေးချာလျှင်
> ပညာဆိုရာမှာ..အတန်းပညာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုမြင့်မားစေတာမို့
> ပညာတတ် တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ပညာဆိုရာတွင် အဆင့်ဆင့်မခွဲပဲ
> အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာသည်လည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။ အဓိကမှာ အသိဥာဏ်
> ဆင်ခြင်တုံတရား မြင့်မားမှုမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ စီးပွားရေးဟာလည်းပညာရေးနှင့်
> ဆက်စပ်နေပါတယ်။ တစ်ခုမြင့်မားလာလျှင် ကျန်တစ်ခုက အချိုးတူ မြင့်လာပါတယ်။
> ပညာမတတ်ပဲချမ်းသာနေသူတွေကိုတွေ့ရပေမဲ့ ပညာမတတ်ခဲ့လျှင် ငွေပင်ရှိစေဦးတော့
> ပွဲလယ်မတင့်ပါဘူး။ လူမှုရေးချာလျှင်…..ပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမပြုပဲ
> ချမ်းသာလာတဲ့သူ အများစုဟာ အနေအထိုင် စရိုက် ဟန်ပန်တွေမှာ ပညာတတ်သူကို
> မမှီနိုင်ဘဲ ငွေပါတာက လွဲပြီး အသိဥာဏ် နည်းတတ်ပါတယ်။ ဆင်ခြင်တုံတရား
> အဲဒီ သုံးမျိုး သုံးပါး ပါနေတာကို သိပါလျှက်နှင့်
> မလွဲမရှောင်သာလို့ဖြစ်စေ၊ တဇွတ်ထိုးလုပ်လိုစိတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘေးဖယ်ပြီး
> စဉ်းစားလို့လက်တွဲလိုက်ပြီးရင်တော့ ဘ၀မှာ
> အမှားနှင့်တစ်သက်လုံးရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ရောက်ပြီးမှ
> ပြန်ပြင်ချင်ပါရစေလို့ ဆိုရင် နောက်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ဟာ
> တစ်ခါရေးပြီးတိုင်း တစ်ခါ ပြန်ဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်ရေးနိုင်တဲ့ ကျောက်သင်ပုန်း
> မဟုတ်ပါဘူးလို့ ရေးသားထားတာကိုပြန် အမှတ်ရရင်း မှတ်မိသလောက်ပြောပြခြင်းပါ။
> ငယ်စဉ်က အသိလေးကတော့ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ ချစ်တာတွေ၊ မေတ္တာတွေ၊
> အဓိကထင်တာပါ၊ အခု အသက်လေးရလာတော့ လူမှုဘ၀ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ဘ၀
> တက္ကသိုလ်ကြီးက ပညာတွေ ပို့ချလာတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်
> အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ မပူချင်လို့ ယောက်မရှာတာမျိုးပါ၊ ဒီအပြင် မိန်းကလေးတွေ
> လက်ထပ်ခြင်းကို စဉ်းစားရာမှာ အောင်ဘာလေထီထိုးတဲ့ သူတွေလိုပါပဲ။
> ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ဆုကြီးကို မျှော်ပြီး၊ စိတ်ကူးပြီး ဂဏာန်းတွေရွေးတာပဲ၊
> ပေါက်မယ်ထင်ရတဲ့ ဂဏန်းတွေပေါ့နော်။ အဲ…ထိုးပြီးရင်လည်း စိတ်ကူးယဉ်ရတာပဲ။
> ဘယ်လိုသုံးစွဲမယ်၊ လှူမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ထီဖွင့်တဲ့အခါ မှာလည်း သိန်း ၁၀၀၀
> ဆုမှန်းပြီး ပထမကြည့်တယ်။ နောက်သိန်း ၁၀၀ နောက် ၅၀ စသည်ဖြင့် အစဉ်လိုက်
> တိုက်လာလိုက်တာ နောက်ဆုံး တွတ်ရရင် တောင်မဆိုးပါ ဘူးပေါ့။ တွက်ကိန်းတွေနဲ့
> တိုက်လာလိုက်တာ…ထီစာရင်း လည်းကုန်သွားရော…ဘာမှ မပါတော့ သွားပြန်တော့
> ဒီတစ်ခါဆိုသလို…ဘယ်ဆုနဲ့တွေ့မယ် ဗလာမဲ နဲ့တိုးမယ်…မပြောနိုင်ပါဘူး။
> မိန်းကလေးတွေ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါလည်း ထီဆုကြီးမှန်းသလို အားလုံးတော့
> အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ ဒါလေးကတော့ ဒီလိုဆို အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ စိတ်ကူးကြီင်္းတွေ
> နဲ့ပေါ့။ ဗလာမဲနဲ့ လည်းတိုးနိုင်ပါတယ်။
> ဒါအပြင် အိမ်ထောင်ရေးကံ ကောင်းမကောင်းဆိုတာကလည်း ကုသိုလ် နှင့်လည်း
> ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ရှေးရှေးက ပြုခဲ့တဲ့ကံ ကံ၏အကျိုးတွေပါ။ မိမိတို့
> အတိတ်ဘ၀များက ပြုခဲ့သည်ကံများလည်းရှိရာ ထိုကံများသည် မိမိပြုခဲ့သော
> အကျိုးပေးတတ်သည်။ အတိတ်ဘ၀ကံ မမြင်ရ၍ မသိစေဦးတော့ ယခု မျက်မှောက်ဘ၀၌
> ကံကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ကာ လက်ငင်းကောင်းအောင်လုပ်ပါက ကောင်းကျိုး
> ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး သည်
> သည်းခံခြင်း၊ ခွင့်လွတ်ခြင်း၊ နားလည်ပေးခြင်းစသော အမှုတို့ဖြင့်
> ပြုကျင့်ကြလျှင် သိန်း ၁၀၀၀ ဆုကြီးမပေါက်စေဦးတော့ ထီပေါက်စဉ်ဖိုး
> ကဲ…သိသလောက်လေးတော့ ဆွေးနွေးပြီးပါပြီ… တူနှစ်ကိုယ်တဲ့အိုပျက်မှာ
> နေရ..နေရ…ဟူသောအတွေး၊ ရေရှားတဲ့ သဲကန္တာရ မရှောင်တယ် ဟူသော စိန်ခေါ်မှု၊
> မှ လှမ်းမရ ရင် တံချုနှင့် ခူးပစ်မယ် ဆိုတဲ့ ရဲရဲတောက် အချစ်မျိုး ငယ်စဉ်က
> မတွေ့ခဲ့၍………. ဒီခေါင်းစဉ်လေးနှင့်တော့ မေ၁၆ ဦးနှောက်ခြောက်
> အားလုံး မေတ္တာချစ်ခြင်း၊ ကံကောင်းခြင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Share By Forward Mail………………..
အင်း…. တော်ပါသေးရဲ့ ကွာသုံးကွာမှာ အသက်ကွာတာမပါလို့
အွန် ~~~~~~~အနော် က ဘယ် က ပါ လာတာတုန်း
အပေါ်က မန့်တာ ဦးနီ လေ
ဆောရီး ………….. ဆောရီး…………. ဟီးဟီး ဦးနီကိုပြောတာ…………..
Blind love is true.
ကျတော်က အခုမှ အသစ်ဝင်တဲ့ မန်ဘာတစ်ယောက်ပါ ကျတော်နမ်မည်က ကိုတိုးလို့ခေါ်ပါတယ် နေတာက မုံရွာကပါ အစ်ကိုတို့ပြောတာတွေကြည့်ရတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရင်းနှီးကြတယ်နဲ့တူတယ် ကျတော်လည်း ခင်ချင်ပါတယ်……. ကျတော်က အစ်ကိုတို့လို စာတော့မရေးတတ်ဘူးဗျာ
(အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုလို သိခွင့်ရတဲ့အတွက်)
ကိုတိုးရေ အားလုံးက ခင်တတ်ပါတယ်။ တယောက်မှ မမြင်ဘူး ကြပေမဲ့ မောင်နှမတွေလိုဘဲ စကားပြောတဲ့ အခါ ရင်းနှီးမှု ရှိကြတယ် အသုံးအနှုန်း ရင့်ရင့်သီးသီးနဲ့ သူတပါး စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်အောင် မလုပ်ကြဘူး။ ကြိုဆိုပါတယ်။
လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်တွေပါပဲ ဒါတွေ မပြည့်စုံလို့သာ မယူကြဘူးဆိုရင် ဆူးရေ မမတို့ဂိုဏ်းဝင်တွေ များလာမယ်ထင်တယ်နော် အဟိ….
တစ်ကယ်တမ်းအိမ်ထောင်ပြုမယ်လည်း ဆိုရော ဒါမျိုးတွေ သေချာမစဉ်းစားဖြစ်ကြတဲ့လူများပါတယ်…။
(၁) တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကွာလျှင် (၂) အယူဘာသာကွာလျှင် (၃) စိတ်ဓာတ်ချင်းကွာလျှင်
(၁)နှင့်(၂)ထက် (၃)ကပိုအရေးကြီးသည်ဟု ထင်ပါသည်။ မိန်းခလေးဖြစ်လို့ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါ သျှောင်နောက်ဆံတုံးပါ၊ သားကိုသခင် လင်ကိုဘုရားဆိုတဲ့ ရှေးအတွေးအခေါ်တွေကြောင့် အချို့မြန်မာမများဘာသာခြား လူမျိုးခြားနဲ့ညားရင် ကိုယ်ပိုင်ဘာသာ၊ထုံးစံကို စွန့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ရှေးကတော့ ပညာမတတ်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနဲလို့ ထားပါတော့။ ယနေ့လို အထိုက်အလျောက် ပွင့်လင်းသောခေတ်တွင် မိမိကိုယ်မိမိ ပိတ်ဆို့ထားမည့်အစား တန်းတူရည်တူရှိဖို့၊ ခေါင်းငုံ့မခံဖို့၊ ဗဟုသုတမခေါင်းပါဖို့သာ နှိုးဆော်သင့်သည်ထင်ပါသည်။ နို့မို့ရင် တောနေမြန်မာမအများ ခေတ်ပညာကမတတ်၊ ဗဟုသုတကမပြည်စုံ၊ ကူညီမဲ့အဖွဲ့အစည်း သတင်းအချက်အလက်ကမရှိ၊ အနေနီးစပ်ပြန်တော့ စိတ်မထိန်းနိုင် ဒါနဲ့ပဲ လူမျိုးကွဲ ဘာသာမတူသူတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျ၊ နောက်ဆုံးတော့ အတင်းရိုက်သွင်းထားတဲ့ဘောင်လဲ ပြိုပျက်ပြီး ယောက်ျားဖက်ကို မျက်စိမှိတ်လိုက်ရပါတယ်။ ကျန်ရစ်သူ မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း ဘာသာခြားတွေလို ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ ကိစ္စကို ရတန်သလောက်ပြန်အဖတ်ဆယ်ဖို့ ကြိုးပမ်းမဲ့အစား အမျိုးဘာသာသာသနာ စတာတွေနဲ့ ရေနစ်သူကို ဝါးထိုးပြီးနှစ်ကြတယ်။ အားလုံးတူရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့လေ။ ဒါကြောင့် တနေ့တခြား ပိုမိုရောထွေးယှက်တင်ဖြစ်လာနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ အများစုလိုက်နာနိုင်မဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ ကျင့်ထုံးကို ပိစိကွေးတို့လို မိန်းခလေးများက ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုသင့်ပါကြောင်း။
ကိုကြောင်ကြီးပြောတာ ..ထောက်ခံပါတယ်ဗျို့ ..။
ထပ်ပြောရရင်.. အပေါ်က..စာတွေထဲ…ပြောတာတွေတော်တော်များများ… မိုဒယ်အောက်နေပါတယ်လို့ပါပဲ..။
ကြည့်ရတာ ..မိုးဒယ်အောက် . ကွန်ဆာဗေးတစ်ကြီး… တယောက်ယောက် ရေးပုံရပါတယ်.။
– ကွာသုံးကွာက.. လည်း လူမျိုးရေးခွဲနေပုံကြီးဖြစ်နေပါတယ်.။ – ကမ္ဘာရွှာခေတ်ကို မမြင်မိသလားမသိ..။
– ပါသုံးပါက .. ဒီခေတ်မှာ .. အကြွေးဝယ်ကဒ်ရဲ့စံနစ်သိပုံမရပါဘူး.. ပြီးတော့ .. ဖွံ့ ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်တွေက .. လူတိုင်းက ..အကြွေးတွေ..မောဂိတ်တွေ.. ကားကြွေး..အာမခံကြွေး..စသည် တို့နဲ့ လည်ပါတ်နေတာ သိပုံမရပါဘူး.. လူပိုကလည်း .. ဒီခေတ်.. မိသားစုနဲ့.. ကလေးတွေရဲ့တာ ၀န်..တွေနားလည်ပုံသိပ်မရပါဘူး..
– ချာသုံးချာဆိုတာမှာလည်း.. ကျောင်းပညာမှ .. စာ လိုထင်နေပုံရပါတယ်..။
ကြိုက်ရင်.. နှလုံးသားနဲ့စဉ်းစား.. ဦးနှောက်နဲ့..တွက်ပြိး ယူဟေ့..။
ဥိးနှောက်နဲ့တော့ ဘာမှကြီုမတွက်ကြနဲ့…။ တွက်ပါများရင်.. ငယ်တုံးခံစားရမဲ့အချိန်တွေ..အလဟသဖြစ်တာကို ..ကြီးမှ..နှမြောမိလိမ့်မယ်..။
ယူပြိးမှ ..အဆင်မပြေရင်..ကွဲကြ…။လမ်းခွဲကြ..။ တစ်ကပြန်စ…။
အိမ်ထောင်မှုက ..ပြင်လို့ရတယ်..။ ဘာမှအဆန်းမဟုတ်ဖူး..။
အိမ်ထောင်မှု။ ဘုရားတည်။ ဆေးမှင်ရည်စုတ်ထိုး.. ဒီခေတ်မှာ ..အကုန်လွယ်လွယ်ပြင်လို့ရပါကြောင်း..။
သဂျီးနဲ့ကျုပ်ကြားမှာ ကွာဟချက် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျဉ်းမြောင်းလာပြီ။ တဆင့်ထက်တိုး နီးစပ်ဖို့ပဲ ကျန်တယ်။ ခက်တာ သဂျီးက အစားကြူး ရုပ်ဝါဒီ၊ ကျနော်က သက်သတ်လွတ် နာမ်ဝါဒီသမား။ ဒီတော့ နှစ်ယောက်စလုံး တမျိုးစီ လျော့လိုက်ကြရအောင်။ ကျနော်က အသားပြန်စားမယ် သဂျီးက ကျနော်ပေးတဲ့ ဩောင်းနမော ဂါထာကို နေ့နံကိုက်ပြီး ရွတ်နိုင်မလား။ မဟုတ်ရင် ငယ်တုံးခံစားရမဲ့အချိန်တွေ..အလဟသဖြစ်တာကို ..ကြီးမှ..နှမြောမိလိမ့်မယ်.. (သဂျီးစကားအတိုင်း)
ဦးကြောင်ကြီး နဲ့ သဂျီးတော့ ပြန်ပေါင်း ထုတ်မလို့လား။
ပြန်ပေါင်း ၂၀၀ဖိုး အဆစ်ပါပေးနော်။ ရွာထဲက ကလေးတွေကို ဝေမလို့ ၂၀၀ ဖိုး လာဝယ်တာ။
ကြောင်ဆိုတာက အသားစားသတ္တ၀ါ.. အသားမစားရင်သေမှာပဲ..။
လူလည်း ..အသားစားဖို့သဘာဝက ခွင့်ပြုထားတဲ့သတ္တ၀ါပဲ..။
သွားတွေမှာရှိတဲ့ .. အံသွားနဲ့ အံစွယ်တွေက ..အသားစားဖို့ သဘာဝက ခွင့်ပြုထားတာရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ပြယုတ်တွေပေါ့။
ွှလူရဲ့သွား ၃၆ချောင်းထဲက ..အံသွားတွေနဲ့ ရိုးရိုးသွား အချိုးချကြည့်..အဲဒါ.. လူစားရမဲ့..အသားနဲ့ အသီးအရွက်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းအချိုး ပဲ..။
ဆိုတော့ … ကိုကြောင်ကြီးအသားမစားရင်.. သတ္တ၀ါတခု ဒုက္ခရောက်မှာမို့ .. ကယ်တင်တဲ့အနေနဲ့.. ဩောင်းနမော ဂါထာကို နေ့နံကိုက်ပြီး ရွတ်ပေးပါ့မယ်..။
ပြောရရင်.. သြောင်း၊ ဥုံတွေက .. ဟိန္ဒူဘာသာက.. ဂါထာအစမှာ ကျူးရင့်ရတဲ့ အသံထွက်တွေပဲ..။
ကြည့်ရတာ … မဟာဗြဟ္မာကိုးကွယ်ရမလိုဖြစ်နေပါပြီ..။
လွယ်လွယ်ပြင်လို့ရတိုင်း လွယ်လွယ်ယူ လွယ်လွယ်ကွဲနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ ရှေ့လျှောက် မတွေးဝံ့စရာတွေပါပဲ။ ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလည်း မလွယ်နဲ့ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကား မကြာခင် တိမ်မြှုပ်ပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာလား……..
ဟုတ်တယ် မ နော ပြောတာ မှန်တယ်။
နှလုံးသားနဲ့ခံစား ဦးနှောက်နဲ့ဆုံးဖြတ် သိပ်တော့မလွယ်ပါ
ရွာထဲ အ ပြို ကြီး တွေ တယ်များသား
မိန်းမဆိုတာ ယူလိုက်ရင် တစ်ယောက်ထဲရမှာ
ချစ်သောသူများ ညားပြီး ကံကောင်းစေသတည်းလို့ ပဲ ဆုတောင်းပေးတော့မကွယ် …
ငါတို့ကတော့ ပါသုံးပါမှာ လူပိုပါတာကို ကန့်ကွက်ပါတယ် သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတာရှိတယ်လေ မိသားစုတစ်ခုမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့မိန်းကလေးမို့လို့ဈေးတွက်တွက်ပြီးမယူဘူးဆို၇င်လဲ ငါတို့ကတော့ကန်တော့ဆွမ်းပါပဲ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်မှာထဲက သူ့ အကြိုက်နဲ့ သူရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တဘ၀လုံးလက်တွဲရမယ် သူ ၊ နှစ်ယောက်တစ်ဘ၀ တည်ထောင်ရမယ့် သူကို ကိုယ့် အကြိုက်မပါဘဲ ၊ မချစ်မနှစ်သက်ဘဲ ကိုယ့်ဘ၀ တိုး တက်ရေးကိုသာ စဉ်းစားပြီး ရွေးမယ်ဆိုရင် တခုခုတော့လွဲနေပြီ။
ဥပမာပြောရရင် လိမ္မော်ရောင် ကြိုက်တဲ့သူ အတွက် အင်္ကျီ ဆိုင်ရောက်ပြီဆိုရင် လိမ္မော်ရောင် အင်္ကျီတွေထဲက မှ အကြိုက်ဆုံး တစ်ထည်ကိုရွေးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲလိုဘဲ မိမိဘ၀ တိုးတက်ချင်သူ ၊ အောင်မြင်လိုသူ တွေက သူတို့ နဲ့ လိုက်ဖက်ညီမယ့် သူ ဘ၀လက်တွဲဖေါ် ကို ရွေးကြပြီဆိုရင် အရေအချင်း ရှိတဲ့သူ ကိုဘဲ (ပေတံတွေ အရမဟုတ်) ရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။
အဲဒိလိုပြောနေကြတာကိုက တစ်ကယ် ချစ်ကြိုက်ရမဲ့သူ မတွေ့သေးလို့လို့ ယူဆပါတယ်။ တစ်ကယ်ကြိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘာကိုမှ စဉ်းစားကြမည် မထင်ပါ။ အားလုံးဟာ ကိုယ်ပြုပြင်လို့ ရတာပဲလို့ မျက်လုံးမှိတ် တွေးပြိး ယူလိုက်ကြမှာပါ.. ။ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ ကိုကြောင်ကြီးတို့ ကိုဖက်တို့ အသိဆုံးနေမှာပါ။ ဘာတွေပဲပြောနေနေ … ဘယ်လိုစကားတွေပဲရှိရှိ မှားသိရင်တော့ပြင်ရမှာပေါ့။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာကို စာမေးပွဲလို သဘောထားကြည့်လေ။ ပု စ္ဆာ အမှားကြီးကိုဆက်တွက်နေမလား ။ စာတစ်ပုဒ်ကိုမှာဖြေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့အမှားသတိရတဲ့ အချိန်မှာ ဖျက်ပြီး အမှန် ပြန်ရေးသလိုပေါ့ ။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာလည်း အမှားတစ်ခုဖြစ်သွားရင် အမှတ်မရပဲ အချိန်ကုန်ဆက်ဖြေမလား ။ အမှန်ကို ပြန်ပြင်ရေးမလား။ကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ကျသွားရင်လည်း တစ်နှစ်ပဲ အချိန်ကုန်တာ။ အိမ်ထောင်ရေးမှားသွားလို့ မပြင်မိရင် တစ်ဘ၀လုံးအချိန်ကုန်တာနော် ။ အကြောင်းမသင့်ရင် သံသရာ ပါပါသွားလို့ကတော့ပြိးရောပဲ
အဲဒိတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ် ဖိုးဖိုးကတော့ တီးမာစတာပဲ ကြီုက်တယ်။ ဟာာာားးးးမွှားကုန်ပြီ
ဟိဟိ… ပိစိကွေးလေးက ကြယ်လေးကို စိတ်စွဲနေသတဲ့ ရွာထဲမှာ ဘယ်သူ့လက်တို့ပြီး ပြောရရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ် ….
ဦးနီနော်….. ပိစိကွေးက ကိုကြယ်လေးရေးတဲ့ပိုစ့်တခုကိုဖတ်ရင်းနဲ့ မန့်လိုက်တာဆိုတော့ ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါ…… စိတ်ထဲစွဲနေတယ်ဆိုတာ ရိုးရိုးသားသားပြောတာကို ….. တူညားကို …….. ဟင့်………